ဓါတ်မတည့်ခြင်းနှင့် coronavirus လက္ခဏာများ - ကျွန်ုပ်၌ဘာရှိသနည်း။ - ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ | ဇန္နဝါရီလ 2022
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကျန်းမာရေး ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေး ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ပြင်းထန်သောအားကစား ကုမ္ပဏီသတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ဖျော်ဖြေရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး သတင်း
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ >> ဓါတ်မတည့်ခြင်းနှင့် Coronavirus လက္ခဏာများ - ကျွန်ုပ်မှာဘယ်ဟာရှိသလဲ။
CORONAVIRUS UPDATE - ကျွမ်းကျင်သူများသည် Coronavirus ဝတ္ထုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလာသည်နှင့်အမျှသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲများလည်းဖြစ်ပေါ်လာမည်။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးပေါ်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကြည့်ရှုပါ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ ။
သငျသညျပုံမှန်အတိုင်းထက်ပိုမိုနှာချေခဲ့တာသတိပြုမိပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး၊ မင်းမှာလည်ချောင်းနာနေပြီးချောင်းဆိုးနေတယ်။ COVID-19 ရနိုင်မလား? သို့မဟုတ်၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင်ပေါ်ပေါက်လေ့ရှိသည့်အလွန်ကြင်နာသောဓါတ်မတည့်ခြင်းများကြောင့်လော။ ခြားနားချက်ကိုသိရှိခြင်းသည်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူတို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်သာမကသင်၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုအတွက်ပါအရေးကြီးသည်။
Coronavirus လက္ခဏာများ - ဓာတ်မတည့်ခြင်း - တူညီသော်လည်းကွဲပြားခြားနားသည်
ရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့် coronavirus ရောဂါကူးစက်မှုများသည်အလားတူလက္ခဏာအနည်းငယ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဆင်တူမှုအဆုံးသတ်မည့်နေရာဖြစ်သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်သန်း ၅၀ ခန့်သည်ဓာတ်မတည့်မှုများကိုနှစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရပြီး၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ခြောက်ကြိမ်မြောက်နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်အမေရိက၏ဓာတ်မတည်ဖောင်ဒေးရှင်း (AAFA) ။ ရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည့်မှုသည်အချို့သောမြက်ပင်များ၊ သစ်ပင်များ၊ ပေါင်းပင်များနှင့်မှိုများပွင့်လာသောအခါနွေ ဦး ရာသီ၊ နွေရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီတို့တွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်လေ့ရှိသည်။
Coronaviruses သည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ၊ အချို့သည်အအေးမိခြင်းကဲ့သို့သောအမြဲတမ်းပျံ့နှံ့နေသည့် rinovirus များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သို့သော် coronavirus ဝတ္ထုတပုဒ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းကတရုတ်၊ Wuhan တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားသော ။ အဖြစ်များသောရောဂါလက္ခဏာများက ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) သည် -
သက်ဆိုင်သော: သင်၏ coronavirus ရောဂါလက္ခဏာများသည်နူးညံ့။ အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်လျှင်အဘယ်သို့သိနိုင်သနည်း
နှာခေါင်းရှုံ့ခြင်းနှင့်ယားယံခြင်း၊ ရေစိုနေသောမျက်စိများသည် COVID-19 ၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ Shuhan He , MD တစ် ဦးဘော်စတွန်ရှိအရေးပေါ်ဆရာဝန်နှင့် Conduct Science ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့စမ်းသပ်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်အဓိပ္ပါယ်အတိအကျမသိနိုင်, ဒါပေမယ့်သင်ကသူတို့အားရှိပါက, ထို့နောက်သင်ဖြစ်ကောင်း coronavirus ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။
အဖျားရှိရင်ကော။ ဥပမာအားဖြင့် - ၉၉ ဒီဂရီပြင်းထန်သည့်ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်သည့်အလွန်နိမ့်သည့်ဖျားနာဖြစ်နိုင်သည် အန်းမာရီ Ditto , MD, ချီကာဂိုရှိ Northwestern University Feinberg ဆေးတက္ကသိုလ်ရှိဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်ရောဂါကုသခြင်းဌာနခွဲတွင်ဆေးပညာတွဲဖက်ပါမောက္ခ။ သို့သော်အဖျားများသောအားဖြင့်ဤ coronavirus အပါအ ၀ င်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကို ပို၍ ညွှန်ပြသည်။
သက်ဆိုင်သော: COVID-19 ၏လက္ခဏာများသည်တုပ်ကွေးနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
သင် coronavirus ကိုဖမ်းနိုင်သည်သို့သော်မတည့်ပါ
Coronavirus ကူးစက်မှုသည်အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်မှုများကဲ့သို့ရောဂါကူးစက်ခံထားရသောလူများ၏အစက်အပြောက်များမှဖြစ်ပွားသည်။ ကူးစက်ခံထားရသူတစ် ဦး သည်သင့်အားနှာချေခြင်းသို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်သင်ထိမိသည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးယူနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏လက်များကိုမှန်မှန်နှင့်သေချာစွာဆေးကြောသန့်စင်ပါ၊ မျက်နှာပြင်များကိုပိုးမွှားပါ၊ ဖြစ်နိုင်လျှင်လူများနှင့်ဝေးဝေးသွားပါ၊ သင်၏လက်နှင့်သင်၏လက်ကိုထိခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါဟုကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြားသည်။
ဓာတ်မတည့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကူးစက်တတ်ကြသည်မဟုတ်။ သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ် - အပြည့်အဝနားမလည်သောအကြောင်းပြချက်များ - အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများ (ထိုကဲ့သို့သောသစ်ပင်များ၊ မြက်ပင်များ၊ ပေါင်းပင်များ - အစရှိသဖြင့်) သည်နိုင်ငံခြားကျူးကျော်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်မှားယွင်းပြီးသင်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုကာကွယ်ရန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစတင်သောအခါ၎င်းတို့သည်အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှာချေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ယားယံခြင်း၊
သင်ဓာတ်မတည့်ရောဂါလက္ခဏာများသို့မဟုတ် coronavirus ရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်ခံစားနေရပြီလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ memory lane down သွားရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နွေ ဦး ရာသီနှင့်နွေ ဦး ရာသီနှင့်ထိုမတိုင်မီနွေ ဦး ရာသီကိုပြန်စဉ်းစားပါ။ ပြက္ခဒိန်မတ်လမှAprilပြီလအတွင်းလှန်လိုက်သောအခါသင်ပုံမှန်နှာခေါင်းနှင့်ယားယံနေသောမျက်စိရှိသလား။ ဒါကသင်ရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည်ခြင်းနှင့် coronavirus ရှိသည်ကောင်းတစ် ဦး အရိပ်အယောင်ပါပဲ။ ဒေါက်တာ Ditto ၏အဆိုအရဓာတ်မတည့်မှုများသည်နောက်ပိုင်းတွင်အသက်မကြီးပါ။ သငျသညျအရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ် ဦး ရုတ်တရက်နှာရည်ယိုယွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးခြင်းကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများကိုကြုံတွေ့ရလျှင်သင်ကသူတို့ကိုယခင်ကတစ်ခါမှမဖူးဖူးလျှင်ဓာတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
လူများသည်ဓာတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်သေဆုံးနိုင်သော်လည်းများသောအားဖြင့်၎င်းတို့တွင်အချို့သောအစားအစာများ (အခွံမာသီးသို့မဟုတ်ကြက်ဥများ)၊ ဆေးဝါးများ (penicillin ကဲ့သို့) (ဥပမာ - ရာဘာစေးကဲ့သို့သော) ဓာတ်မတည့်ခြင်းများပါဝင်သည်။ မတည့်သည့်နာတာရှည် (နှာရည်ယိုယွင်းနေသောနှာခေါင်းနှင့်ယားယံသောမျက်လုံးများ) သည်မသက်မသာဖြစ်သော်လည်းမသေနိုင်ကြောင်းဒေါက်တာ Ditto ကပြောသည်။ သို့သော်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကဲ့သို့သောဓာတ်မတည့်မှုများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
CDC ၏အဆိုအရဤ coronavirus အသစ်၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများစုမှာပျော့ညံ့သော်လည်းအထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါသို့မဟုတ်နှလုံးရောဂါကဲ့သို့သောအခြားကျန်းမာရေးပြifနာများရှိပါကရောဂါဖြစ်ပွားမှုမှာအလွန်ဆိုးရွားနိုင်သည်။ အခြားသတိပြုရမည့်အချက်များ -
COVID-19 ပေါက်ဖွားသည့်ကာလသည် ၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိဖြစ်သည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထိတွေ့ပြီးနောက်။
ဗိုင်းရပ်စ်သည်မည်မျှကူးစက်ပျံ့နှံ့သည်ကိုကျွမ်းကျင်သူများကမသေချာပါ အကြောင်းသင်ယူဖို့အများကြီးရှိနေတုန်းပဲလို့ပဲ။ ၎င်းသည်လူတို့ကြိုတင်ထိတွေ့ခြင်းမရှိသောဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နိုင်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာရာသီအလိုက်ဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရသောလူ ဦး ရေလည်းမြင့်တက်နေပုံရသည် အနည်းဆုံးတစိတ်တပိုင်းကြောင့်ဟုကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြားသည် ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှင့်ရောဂါပြီးပညာဆိုင်ရာအမေရိကန်အကယ်ဒမီ (ACAAI), ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရန်။
Coronavirus ကိုကုသရန်သင်လုပ်နိုင်သမျှမှာရောဂါလက္ခဏာများကိုစီမံရန်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များသည်ဖျားနာခြင်းကိုလျော့ကျစေသည် Tylenol အနားယူခြင်းနှင့်အရည်များ။ အသစ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများသော်လည်း, ကဲ့သို့ Favilavir နှင့်ကာကွယ်ဆေးဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်း, အဘယ်သူမျှမလက်ရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရရှိနိုင်ပါ
သင်မခံစားနိုင်သည့်အရာများ (များများ) ကိုပမာဏအနည်းငယ်သာလက်ခံခြင်းပါဝင်သော allergen immunotherapy သည်သင် (မကြာခဏဆေးထိုးခြင်းမှတဆင့်) သင်၎င်းကိုမခံစားမိဘဲသင်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ကတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုရပ်တန့်သွားသည်အထိပြုလုပ်ပေးသည်။
သငျသညျ coronavirus လက္ခဏာတွေလည်းကြုံနေရသူတစ် ဦး ဓာတ်မတည်ခံစားနေရလျှင်, နှစ် ဦး စလုံးအခြေအနေများကုသပါ။ ဒီရောဂါကူးစက်မှုအတွင်းမှာအခြားရောဂါတွေလည်းဖြစ်ပွား ဦး မှာပါလို့ Dr. He ကသတိပေးထားပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းနှင့် COVID-19 တူညီမှုရှိခြင်းသည်သင့်အား ပို၍ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်သော်လည်းသင်၏ကုသမှုအစီအစဉ်သည်မပြောင်းသင့်ပါ။
သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းတွင်ဓါတ်မတည့်မှုအရေအတွက်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ ဓာတ်မတည်ဆေးကိုယူပါ ရောဂါမြင့်တက်သောအခါလက္ခဏာများမစတင်မှီပင်။
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း အဆိုပါ coronavirus ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ ရောဂါကူးစက်ခံထားရသူများ၏အစက်များကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။
သင်၏လက်များကိုမကြာခဏ (အထူးသဖြင့်အစာမစားမီ) ကိုစက္ကန့် ၂၀ အပြည့်ဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်ဆေးပါ။ လက်သည်းအောက်၌ဖြစ်စေ၊
လက်သန့်ရှင်းဆေးကိုသုံးပါ ဆပ်ပြာနှင့်ရေမရရှိနိုင်သည့်အခါအနည်းဆုံးအရက် 60% နှင့်အတူ။
လူများနှင့်6ပေဝေးပါကလူအများရှေ့တွင်မျက်နှာဖုံးဝတ်ဆင်ပါ။
တတ်နိုင်သလောက်အိမ်မှာနေနိုင်ပြီးသင်တတ်နိုင်သလောက်လူ ဦး ရေထူထပ်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ရှားပါ။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုရွှေ့ဆိုင်းပါ ခရီးသွား ဖြစ်နိုင်လျှင်။
သင်ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ပါ - အနားယူပါ၊ ကောင်းမွန်စွာစားသောက်ပါ၊
ကျွန်ုပ်တွင်ဓာတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ် COVID-19 ရှိပါသလား။
အကြောင်းရင်းများ သစ်ပင်များ၊ မြက်များ၊ ပန်းများ၊ ပေါင်းပင်များ၊ မှိုများ၊ မှိုများ SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခြင်း
ကူးစက်ခြင်း လူတစ် ဦး မှတစ် ဦး သို့ကူးစက်။ မရပါ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ရောဂါရှိသူအခြားအစက်များဖြင့်ပျံ့နှံ့သည်
ရောဂါလက္ခဏာများ နှာချေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ အဖျား၊ ခြောက်သွေ့သောချောင်းဆိုး၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အရသာနှင့်အနံ့ဆုံးရှုံးမှု၊ ဦး ခေါင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ မ်းလျှောခြင်း။
ကုသမှု Antihistamine,decongestants, immunotherapy အဖျားလျှော့ချခြင်း၊ အနားယူခြင်း၊ အရည်များ
ပြင်းထန်မှု ဓာတ်မတည့်လျှင်ဓာတ်မတည့်မှုများပြင်းထန်ခြင်းမရှိလျှင်၎င်းတို့သည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါကဲ့သို့သောအသက်ရှူကျပ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည် Coronavirus သည်ရောဂါကူးစက်ခံရသူများ၏ ၀.၂% မှ ၁% ထိများသောအားဖြင့်အဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့်အင်္ဂါစုံများပျက်စီးခြင်းကဲ့သို့သောရောဂါများကြောင့်သေစေနိုင်သည်
ကာကွယ်တားဆီးရေး အစပျိုးခြင်းများကိုရှောင်ရှားခြင်း၊ လေအေးပေးစက်နှင့်လေစစ်စက်များကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာမပြမီဆေးသောက်ခြင်း မျက်နှာနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ လူမှုရေးအရဝေးကွာခြင်း၊ အများပြည်သူသုံးမျက်နှာဖုံးတပ်ခြင်း၊
အကောင်းဆုံးအကြားအာရုံအကူအညီ ၅ ခု၊ သင်၏အဆုံးစွန်ဆုံး ၀ ယ်လမ်းညွှန်
မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းဆက်စပ်မှု၊ သင်သိရန်အချက် ၅ ချက်
tylenol နှင့် ibuprofen ကိုတွဲသုံးလို့ရသလား
tylenol3သည် codeine နှင့်ဘိန်းဖြစ်သည်